Nampitomboin’ny Kiobà Ny Fahafahana Midira Aterineto Avy Amin’ireo Ivontoerana Natao Ho An’ny Daholobe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2013 23:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Português, polski, Español
Na dia izany aza, tsy nanakàna ny fisian'ny adihevitra be ny fisokafan'ireny ivon-toerana ho an'ny daholobe ahafahana mahazo aterineto ny 4 Jona lasa teo ireny. Araky ny Vahaolana 182/2013 natolotry ny Ministeran'ny Vola sy ny Tetibola [es], eo amin'ny 0.60 “cuc” eo ny adiny iray ho an'ny fifandraisana ao an-toerana, ary 1.50 (US$1.50) ny fandefasana mailaka manerana izao tontolo izao, ary 4.50 (US$4.50) cuc ny fidirana anaty aterineto tsy misy fameperana sy ny tolotra rehetra misy ao aminy.
Karatra “Nauta” ahafahana miditra aterineto. (sary : Cubadebate)
Be loatra raha io sarany io araky ny hevitr'ireo bilaogera sasany ao Kiobà, toa an'i Alejo3399, izay nanamafy hoe [es] :
Raha mitentina efa ho 5 dolara ny ora 1 amin'ny fidirana anaty aterineto, dia ny vola izany no mibaiko ny hoe iza no afaka hiditra aterineto na tsia. Ary manahy ihany aho ny amin'ny hahafahan'ny olona, na dia vao lasa mpanankarena sy manan-katao aza izy, lahy na vavy, hampiasa io zava-baovao io ho fialamboly.
Amin'io lohahevitra io ihany, i Alejo3399 dia manampy toy izao [es] :
Mitaraina izy ireo fa ny halafon'ny saran'ilay tolotra ( izay efa miaiky manakiana tena ho toy ny tsy nahavaha na inona na inona akory) dia mamaly ny faharefon'ny fitaovanm-pifandraisan-davitra ao an-toerana, ary manolotra hevitra saro-takarina izy ireo fa hoe ireny sarany ireny dia manome tombony ny fitetezan'ny teratany mba hanabeazana ny vahoaka amin'ny resaka fanjifàny.
Na dia izany aza, lahatsoratra iray [es] navoakan'i Aurelio Pedro tao Progreso Semanal no milaza fa :
Olana mbola tsy mivaha io Aterineto sy ny fahafahan'ny olon-tsotra miditra aminy io, izay fangatahan'ny be sy ny maro. Ireo tompon'andraikitra amin'ilay fampandehanan-draharaha dia niaiky fa tena ambony be ny saran’ izy io, ary nanome toky izy ireo fa rehefa afaka ny hanaovana izany ny ara-toekarena dia hampidina azy ireny ry zareo.
Nizara ny zavatra niainany tanaty tambajotra sosialy ireo mpampiasa “Nauta” voalohany. Mayle González nitantara [es] ny zavatra niainany :
Ny fampakarana lahasary 5 minitra ao Havana na dia mpampiasa ny “Nauta” aza ianao dia mety handoavanao fotoam-piasana adin'ny 6 …
Araky ny hevitr'i Siomel Savio Odriozola [es],
Ny fampiasàna Aterneto adiny iray isan-kerinandro dia andoavanao 18 “cuc” isam-bolana, efa ny 75%-n'ny karama salantsalany izany. Ny kitapo maintsy dia efa hiova ho “lavaka mainty” atsy ho atsy. Andao isika hanisa ny volana na ny taona hidinan'ny vidin'izy io toy ny zava-nisy tamin'ny vidinà finday…
Manohy ny politika sosialin'ny fidirana amin'ny aterineto i Kiobà ho fampiroboroboana ny fidirana anaty aterineto maimampoana any amin'ny Oniversite, Lisea, ary indrindra ireo ivontoerana siantifika. Ny volana May 2013, ilay Ministra Lefitry ny Serasera sy ny Teknolojia ary ny Fifandraisana dia nanambara [es] tao amin'ny gazety mpiseho isan'andro Granma, an'ny fanjakana, fa “tsy ny tsena mihitsy no hibaiko ny fahafahana mahazo fahalalana.” Hatramin'izao, ny zavatra sisa azo atao dia ny manantena fa hidina miandàlana ny vidin'izany, ary ny hahafahana hahazo izany tolota izany any an-tokatranon'ny tsirairay avy.